राजनीति, डाह र डर : RajdhaniDaily.com sharethis
डाह वा इष्र्या मानिसको एक सामान्य भावना हो । यो भावना हरेक मानिसमा कुनै न कुनै रूपमा विद्यमान हुने गर्छ । फरक यति हो, कुनै व्यक्तिमा यो भावना निकै बढी हुन्छ भने कुनै व्यक्तिमा अलि कम हन्छ । कतिपयले यस्तो भावनालाई आफूभित्र लुकाएर राख्ने प्रयास गर्छन् भने अधिकांशले प्रत्यक्षपरोक्ष रूपमा बोली र व्यवहारद्वारा इष्र्या व्यक्त गर्छन् । त्यसो त लुकाएर राख्न खोज्नेहरूले पनि पूर्ण रूपमा लुकाउन असमर्थ हुन्छन् ।
डाह वा इष्र्यामा डर र क्रोधको संयुक्त रूप हो । अर्थात् डाहमा डर पनि हुन्छ, क्रोध पनि हुन्छ । जब कुनै व्यक्तिले आफूलाई पहिलादेखि नै प्राप्त अनुरागमा वास्तविक वा काल्पनिक कमी महसुस गर्छ भने उसमा डाह वा इष्र्या संवेग उत्पन्न हुन्छ । जुन व्यक्तिमा डाह उत्पन्न हुन्छ, उसलाई उसको ठाउँ अर्को व्यक्तिले लिने डर हुन्छ ।
वास्तवमा हार हीन मनोवृतिको उपज हो । मानिसमा यस्तो मनोवृत्ति बाल्यकालदेखि नै देखापर्छ । बालबालिकाले हारको अभिव्यक्ति प्रतिद्वन्द्वीलाई पिटेर, टोकेर वा कुनै प्रतिस्पर्धामा हराउने कोशिस गरेर गर्छन् तर पाका मानिसहरूले डाहको अभिव्यक्ति परोक्ष रूपमा गर्छन् ।
हिन्दी फिल्म थ्री इडिएट्स मा एउटा निकै मनोवैज्ञानिक र सटिक संवाद छ । आफूसँग मिल्ने साथी परीक्षामा फेल भयो भने दुःख लाग्छ तर साथीले आफूले भन्दा बढी अंक ल्यायो भने त्योभन्दा बढी दुःख लाग्छ । वास्तवमा यो संवादले मानिसको मनोविज्ञानलाई दर्साउँछ ।
कुनै गाउँमा निकै मिल्ने साथीहरू थिए, हिन्दी फिल्म सोलेका जय र विरुजस्तै । कागतालीले उनको नाम पनि जय र विरु नै थियो । एक दिन घुमघाम गर्न जय जंगलतिर गएको थियो । अकस्मात् उसले आफ्नो अगाडि वनदेवी प्रकट भएको देख्यो । सपना हो कि विपना उसले ठम्याउन सकेन तर पनि उसले हात जोडेर वनदेवीलाई ढोग ग-यो ।
डाह वा इष्र्या आफैंमा डर र क्रोधको संयुक्त रूप हो, अर्थात् डाहमा डर पनि हुन्छ र क्रोध पनि हुन्छ
वनदेवी मुसुक्क हाँसेर भनिन्, ‘जय ! म तिमी दुईको मित्रता देखेर निकै प्रसन्न छु । वास्तवमा तिमीहरू मित्रताको एक उदाहरण हौं । यसै खुसीमा म तिमीलाई तीनवटा वरदान दिन चाहन्छु । अब तिमी घर जाऊ र मलाई सम्झेर तीनवटा वरदान माग, तत्काल नै ती वरदान पूरा हुनेछन् । तर, एउटा कुरा के भने तिमीले जेजे माग्नेछौं, त्यसको दोब्बर तिम्रो अभिन्न साथी विरुलाई प्राप्त हुनेछ ।’
वनदेवीको कुरा सुनेर जय निकै खुसी भयो । वनदेवीलाई धन्यवाद दिँदै घरतिर दौडियो । आफ्नो पुरानो घरदेखेपछि उसले हात जोडेर प्रार्थना ग¥यो, वनदेवी, मलाई आलिशान घर दिनुस् । जयको प्रार्थना भुइँमा खस्न नपाउँदै पुरानो घरको ठाउँमा एउटा विशाल घर खडा भयो ।
विरु निकै खुसी भयो । अनि उसले सोच्यो, ‘यो भव्य महलमा कैटरिना कैपजस्ती सुन्दरी भए झन् कति मजा आउने थियो ।’ उसले सोच्नेबित्तिकै बार्दलीमा बसेकी एक सुन्दरीले बोलाएको देख्यो ।
अनि ऊ रोमाञ्चित हुँदै बार्दलीतिर लाग्यो । त्यसैबेला सिढीको झ्यालबाट अचानक उसको नजर विरुको घरतिर प¥यो । विरुको पुरानो घरको ठाउँमा दुई भव्य महल खडा थिए । महल अगाडिको लनमा बसेर विरुले दुई सुन्दरीहरूसँग मस्ती गर्दै थियो । त्यो दृश्य देखेर जयको सास फुल्यो । फुटुमा धुँवा पुतपुत्तायो । ऊ एकाएक करायो, वनदेवी मेरो एउटा आँखा फोडिदिनुस् ।
डाह र डरको भावना हरेक मानिसमा विद्यमान हुन्छन् । कुनै पनि मानिस पूर्णरूपमा इष्र्यालु र निडर हुँदैनन् । तर राजनीतिमा डाह र डर दुवै बढी हुन्छ ।
डाह र नकारात्मक डरको भावना जति कम भयो, त्यत्ति नै मानिसको जीवन सफल हुन्छ र राजनीति पनि चुलिन्छ
धेरैलाई अझ पनि सम्झना रहेको हुनुपर्छ । माधव नेपाल प्रधानमन्त्री हुँदा एमालेका अध्यक्ष झलनाथलाई नै सबैभन्दा बढी जलन भएको प्रस्ट देखिन्थ्यो । झलनाथ प्रधानमन्त्री भएपछि माधव र ओलीलाई पनि त्यत्ति नै जलन भएको थियो । सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदा सबैभन्दा बढी डाह र डर देउवालाई भएको सहजै अनुमान गर्न सकिन्थ्यो । अहिले यस्तो डाह र डर रामचन्द्र पौडलमा भएको हुनुपर्छ । कांग्रेस र एमालेको मात्र कुरा होइन, ठूला नेताहरूको मात्र कुरा होइन, हरेक स्थानीय नेता वा कार्यकर्ताहरूमा पनि यस्तो भावना देखिन्छ ।
राजनीतिमा डर र जीत
हिन्दी फिल्म रेसको पर्दामा सैफअली खानले शिर ठाडो पारेर आफ्नो प्रतिद्वन्द्वीलाई गौरवसाथ भन्छ, ‘तुम्ने कभी जिता नही, क्यों कि तुम्ने हमेसा हरानेको सोच्ते हो । मैने कभी हारा नही, क्यों कि मैन हमेसा जित्नेको सोच्ता हुँ ।’ यो संवाद एकपटक गहिरेर सोच्नुहोस् त ? कति मनोवैज्ञानिक छ, यो संवाद, कति सत्य र सटिक छ, यो संवाद । तैंले कहिल्यै जितिनस्, किनकि तैंले सधैं मलाई हराउन सोचिस् । मैले कहिल्यै हारिनँ किनकि मैले सधैं जित्न सोचें ।’
वास्तवमा जित्न सोच्नेले, जित्न खोज्नेले नै सधैं जित्छ । हराउन सोच्नेले, हराउन खोज्नेले कहिल्यै जित्दैन, सधैं हार्छ । त्यो किन भने जित्न सोच्नेले जित्ने सोच्छ, सधैं जितलाई हेर्छ तर हराउन खोज्नेले आफ्नो जितबारे होइन कि सधैं अर्काको हारको बारेमा सोच्छ, सधैं उसलाई हराउन खोज्छ । अनि हराउन खोज्ने आफैं हार्छ, जित्न खोज्नले नै जित्छ ।
डाह र डर समान्य भावना हो । तर, कहिलेकाहीँ यो भावना अनेक कारणले असमान्य हुन पुग्छ । असामान्य डाह र डर मानसिक समस्या हो । यस्तो अवस्था विभिन्न किसिमका मनोवैज्ञानिक रोगको कारण पनि देखा पर्न सक्छ । असामान्य डाह र डरले मानिसको दैनिक जीवनयापनमा नै अवरोध सिर्जना गर्ने हुनाले यसको उपचार आवश्यक छ । डाह र नकारात्मक डरको भावना जति कम भयो, त्यत्ति नै मानिसको जीवन सफल हुन्छ, राजनीति पनि ।
नेता भेट्न नख्खु जेल पुगे मन्त्री थापा